Ugu yaraan 11 qof oo ku dhimatay dhul-gariir cabirkiisu ahaa 5.7 oo ku dhuftay dalka Tanzania - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldUgu yaraan 11 qof oo ku dhimatay dhul-gariir cabirkiisu ahaa 5.7 oo ku dhuftay dalka Tanzania
Dhul-gariirka oo dil-dilaac weyn u geystay wadooyinka. Sawirka: Twitter.
Dare Salam-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 11 qof ayaa lagu dilay in ka badan boqol kalena waa lagu dhaawacay kadib markii dhul-gariir cabirkiisu uu ahaa 5.7 uu ku dhuftay waqooyiga dalka Tanzania.
Dhul-gariirka ayaa ka dhacay magaalada Bukoba oo kutaala xeebta harada Victoria shalay oo Sabti ahayd, sida ay sheegtay waaxda kormeerka dhulka ee Maraykanka.
Iyadoo soo xiganaysa taliye booliis gobol, wakaalada wararka AP ayaa ku warantay in 11 qof ee dhimatay ay ku jireen dhismayaal bulukeeti ah.
Sawiro lagu soo daabacay Twitter-ka ayaa muujinaya dhismayaal ay darbiyadu burbureen ayna soo gaareen dil-dilaacyo waa-weyn.
Dhul-gariirka oo burburiyay dhismayaal badan Sawirka: Twitter.
Bayaan kasoo baxay xafiiska madaxtooyada dalka Tanzania ayaa lagu sheegay “in ay ka naxeen wararka sheegaya in dhul-gariirka uu sababay dhimasho dad badan, ayna ku dhaawacmeen dad kale oo badan, hantina ay ku burburtay”.
January 23, 2017 Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo tagay dalka Tanzania